မဟာဓာတျအားလိုငျးသှယျတဲ့ လုပျသားကား ခြောကျထဲကြ ၂ ဦးသေ၊ ၁၀ ဦးဒဏျရာရ - THIT HTOO LWIN (Daily News) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
မဟာဓာတျအားလိုငျးသှယျတဲ့ လုပျသားကား ခြောကျထဲကြ ၂ ဦးသေ၊ ၁၀ ဦးဒဏျရာရ
ရှမျးပွညျနယျ(အရှပေို့ငျး) ကြိုငျးတုံခရိုငျ၊ တုံတာမွို့အဝငျ ၅ ဖာလုံခနျ့အကှာ တောငျကွီး - ကြိုငျးတုံ ပွညျထောငျစုလမျးမကွီး မိုငျတိုငျအမှတျ (၅၇၈+၅၇၇)ကွားမှာ ဇှနျလ ၄ ရကျနေ့ နံနကျ ၁၁ နာရီခှဲခနျ့က မဟာဓာတျအားလိုငျးသှယျတဲ့ လုပျသားကား ခြောကျထဲကလြို့ ၂ ဦးသေ၊ ၁၀ ဦးဒဏျရာရရှိ ခဲ့ကွောငျး သိရပါတယျ။
ကိုရနျလငျးထကျ(၃၄ နှဈ-ရှတေောငျမွို့) မောငျးနှငျတဲ့ 1L/. .... ဒိုငျနာ အဖွူရောငျ ယာဉျဟာ မဟာဓါတျအားလိုငျးမှ မီးလိုငျးဆှဲ‌ အလုပျသမားအဖှဲ့ ကို တငျဆောငျကာ ပနျကွူ မှ လုပျငနျး သိမျးပွီး အပွနျ မှာ တုံတာမွို့ နဲ့ ၅ ဖာလုံခနျ့အကှာ မိုငျးကာတောငျကှေ့ အဆငျးမှာ အရှိနျ မထိနျးနိုငျဘဲ ခြောကျထဲ ထိုးကခြဲ့တာ ဖွဈကွောငျး ပွနျကွားရေးဝနျကွီးဌာနက သတငျးထုတျပွနျပါတယျ။
အဆိုပါယာဉျ မတျောတဆမှုကွောငျ့ ယာဉျပျေါမှာ ပါရှိတဲ့ လူ၂၉ ဦးထဲက၂ ဦး သဆေုံးခဲ့ပွီး ထိခိုကျဒါဏျရာရရှိသူ ၁၀ ဦး (ကြား(၉)ဦး၊ မ(၁)ဦး ) ရှိကွောငျး သိရပါတယျ။
အဲဒီထဲ့က ထိခိုကျ ဒဏျရာ ရရှိ သူတှကေို ကြိုငျးတုံမွို့ပွညျသူ့ဆေးရုံ၊ သဆေုံးသူ(၂)ဦးကို မိုငျးပဉျြးမွို့နယျပွညျသူ့ဆေးရုံ ပို့ဆောငျကာ ကနျြတဲ့သူတှကေ တုံတာမွို့တိုကျနယျဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှု ခံယူနကွေောငျးလညျး သိရပါတယျ။
ယာဉျမတျောတဆမှု ဖွဈပှားရာနရောကို ကြိုငျးတုံနဲ့ တုံတာမွို့က တာဝနျရှိသူတှေ၊ မီးသတျ တပျဖှဲ့ဝငျတှေ၊ လူမှုကူညီရေး ပရဟိတအဖှဲ့တှကေနေ ကယျဆယျရေးနဲ့ ကူညီရေး ဆောငျရှကျ ပေးခဲ့ပွီး ဖွဈစဉျနဲ့ ပတျသကျသူတှကေိုတော့ တုံတာ နယျမွရေဲစခနျးက အမှုဖှငျ့ အရေးယူ ဆောငျရှကျထားကွောငျး သိရပါတယျ။
မဟာဓာတ်အားလိုင်းသွယ်တဲ့ လုပ်သားကား ချောက်ထဲကျ ၂ ဦးသေ၊ ၁၀ ဦးဒဏ်ရာရ
ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) ကျိုင်းတုံခရိုင်၊ တုံတာမြို့အဝင် ၅ ဖာလုံခန့်အကွာ တောင်ကြီး - ကျိုင်းတုံ ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီး မိုင်တိုင်အမှတ် (၅၇၈+၅၇၇)ကြားမှာ ဇွန်လ ၄ ရက်နေ့ နံနက် ၁၁ နာရီခွဲခန့်က မဟာဓာတ်အားလိုင်းသွယ်တဲ့ လုပ်သားကား ချောက်ထဲကျလို့ ၂ ဦးသေ၊ ၁၀ ဦးဒဏ်ရာရရှိ ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
ကိုရန်လင်းထက်(၃၄ နှစ်-ရွှေတောင်မြို့) မောင်းနှင်တဲ့ 1L/. .... ဒိုင်နာ အဖြူရောင် ယာဉ်ဟာ မဟာဓါတ်အားလိုင်းမှ မီးလိုင်းဆွဲ‌ အလုပ်သမားအဖွဲ့ ကို တင်ဆောင်ကာ ပန်ကြူ မှ လုပ်ငန်း သိမ်းပြီး အပြန် မှာ တုံတာမြို့ နဲ့ ၅ ဖာလုံခန့်အကွာ မိုင်းကာတောင်ကွေ့ အဆင်းမှာ အရှိန် မထိန်းနိုင်ဘဲ ချောက်ထဲ ထိုးကျခဲ့တာ ဖြစ်ကြောင်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။
အဆိုပါယာဉ် မတော်တဆမှုကြောင့် ယာဉ်ပေါ်မှာ ပါရှိတဲ့ လူ၂၉ ဦးထဲက၂ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး ထိခိုက်ဒါဏ်ရာရရှိသူ ၁၀ ဦး (ကျား(၉)ဦး၊ မ(၁)ဦး ) ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။
အဲဒီထဲ့က ထိခိုက် ဒဏ်ရာ ရရှိ သူတွေကို ကျိုင်းတုံမြို့ပြည်သူ့ဆေးရုံ၊ သေဆုံးသူ(၂)ဦးကို မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံ ပို့ဆောင်ကာ ကျန်တဲ့သူတွေက တုံတာမြို့တိုက်နယ်ဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှု ခံယူနေကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။
ယာဉ်မတော်တဆမှု ဖြစ်ပွားရာနေရာကို ကျိုင်းတုံနဲ့ တုံတာမြို့က တာဝန်ရှိသူတွေ၊ မီးသတ် တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ၊ လူမှုကူညီရေး ပရဟိတအဖွဲ့တွေကနေ ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ ကူညီရေး ဆောင်ရွက် ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်စဉ်နဲ့ ပတ်သက်သူတွေကိုတော့ တုံတာ နယ်မြေရဲစခန်းက အမှုဖွင့် အရေးယူ ဆောင်ရွက်ထားကြောင်း သိရပါတယ်။